Nnwom 75 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Abɔnefo bɛnom Yehowa kuruwa ano (8)
Wɔde ma dwom kyerɛfo. Ɔkwan a wɔfa so to dwom no: “Nsɛe Me.” Asaf+ dwom. 75 O Onyankopɔn, yɛda wo ase, yɛda wo ase;Wo din nni akyirikyiri,+Na nkurɔfo ka w’anwonwadwuma ho asɛm. 2 Woaka sɛ: “Sɛ mehyɛ bere a,Mibu atɛntrenee. 3 Bere a asaase ne ɛsofo rewosow biribiri* no,Me na na mikura ne nnyinaso mu.” (Sela) 4 Wɔn a wɔhoahoa wɔn ho no, meka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monnhoahoa mo ho,” Na meka kyerɛɛ nnebɔneyɛfo sɛ: “Mommfa mo ahoɔden nnhoahoa mo ho.* 5 Mommfa mo ahoɔden nntu mo ho saa;Mommfa ahomaso nnkasa. 6 Efisɛ obi rentumi nnya anuonyamMfi apuei, atɔe, anaa anaafo. 7 Onyankopɔn ne Ɔtemmufo.+ Ɔbrɛ obi ase, na ɔma obi so.+ 8 Yehowa kura kuruwa wɔ ne nsam;+Nsã* a ɛwom no repuw ahuru, na wɔafra no yiye. Nea ɛte biara obehwieAma nnebɔneyɛfo a wɔwɔ asaase so nyinaa anom, na wɔbɛnom nea ada ase no mpo.”+ 9 Me de, mɛka ho asɛm daa;Mɛto ayeyi nnwom* ama Yakob Nyankopɔn. 10 Efisɛ waka sɛ: “Mɛma nnebɔneyɛfo ahoɔden* nyinaa asa,Na atreneefo ahoɔden de, ɛbɛyɛ kɛse.”*
^ Nt., “renan.”
^ Nt., “Mommmoma mo mmɛn so.”
^ Nt., “Metwitwa nnebɔneyɛfo mmɛn nyinaa agu.”
^ Nt., “mmɛn de, wɔbɛma so.”